MAHAJANGA : Nodinihina ny fakan-kevitra momba ny fandrafetana teti-bolam-panjakana
Ny talata teo no natao ny fandinihana ny fandrafetana ny tetibolam-panjakana eto amin’ny Faritra Boeny. 8 août 2019
Nandray anjara tamin’izany ireo sampandraharaham-panjakana sy ny fiarahamonim-pirenena ary ny sehatra tsy miankina. Natao antontan-kevitra hiaingana amin’izany ny drafitra fampandrosoana ny Faritra Boeny, izay efa natao n’ny sehatra tsirairay ary nakambana. Efa mirakitra ny hevitra rehetra entina hampandrosoana ifotony ny faritra izy io, ka ny fomba fiasa ankehitriny dia miainga avy aty ifotony ny fijerena ny hamehana sy ny lahasa tokony hatao ho amin’ny fohy ezaka. Efa vonona ihany koa ny fanjakana foibe hamatsy vola ireo fotodrafitrasa ifotony entina hampandrosoana. Anisan’ny nojerena tamin’izany ny fitaterana ny olona sy ny fananany. Tao ihany koa ny tokony hatao amin’ny fametrahana ny angovo madio sy azo havaozina ary ny fampahazoana rano fisotro madio.
Tao ihany koa ny fanaovana toho-drano sy kanalin-drano entina hampitomboana ny velaran-tany azo ambolena. 10 000 ha mahery no ho voatondraka amin’iny Bedango Antanambao Andranolava ao amin’ny distrikan’i Marovoay iny. 7000ha kosa ny ao Ambararatabe Mitsinjo. 1200ha ny ao Maroaboaly Tsilaipeko. Ny ao Soalala izay efa hanomboka moa 2 100ha ao Antsakoamileka. 3500ha kosa ny ao Benetsy Mitsinjo. Tsy mbola ireo irery fa tany an’alina hekitara maro no ho azo ambolena rehefa voatondraka. Hisy ny fanampiana manokana ireo mpanjono ka hametrahana fotodrafitrasa fanamainana sy fampangatsiahana hazandrano ao Soalala sy amin’ny farihy Kinkony iny.
Hametrahana toy izany koa any Mahajamba, Ambatoboeny, Marovoay, Boanamary, Antsanitia ary Andranoboka. Tsy hadino ny fametrahana angovo avy amin’ny masoandro ao amin’ny CDPHM, izay manana olana manokana ankehitriny ka tsy vatsian’ny Jirama herinaratra intsony ka mampiasa milina miteraka herinaratra mandeha amin’ny gazoala. Eo amin’ny sehatry ny fiompiana kosa dia misy ny fametrahana ’station de monte’ hanatsarana ny karazana omby, ka ao Miadana, Andranomavo ary Ambatoboeny no hanaovana izany. Tsy hadino koa ny tontolo iainana ka betsaka ihany koa ny tetikasa hatao hiarovana ny ala sy ny biby miaina ao aminy. Indrindra amin’ny doroala. Misy moa ireo fanampiana ara-teknika sy fampananna asa ireo tanora ihany koa. Sehatra maro no nijerena ireo fandaharanasa fampiasam-bolam-panjakana. Ka ankoatra ny fotodrafitrasa ilain’ny vahoaka dia misy ihany koa ny fanampiana ny fampiofanana sy fanomezana fitaovana hiasan’ireo tanora. Vita ny talata hariva iny ihany moa ity fandinihana sy fandrafetana ny tetibolam-panjakana ity, ka natolotra ireo mpikirakira izany handraisana ny hevitra, ahafahana mampiakatra azy amin’ny fanjakana foibe.